Dhecaanka Cad Ee Dumarka Cambarkooda Kayimaada Waa Maxay? oo Sidee Loo Daanweynkaraa? Dhibaato Maku Keeni Karaa Guska Ninka? Hal Kaan Kaga Bogo… - iftineducation.com
iftineducation.com – Dheecaanka Cad ee dumarka siilkooga ka yimaado waa maxay oo sidee loo daaweeyaa…dhibaato maku keeni karaa guska ninka…?..halkan ka akhriso.
Dhacaanka adag ee dumarka siilkooga ka yimaada inta badan wuxuu astaan u yahay cudurro xagga gudaha, dheecaanka shaqo kuma laha dhiigga caadada ee dumarka marmar waxaa la socda cuncun siiba faruuraha farjiga dumarka.
Mararka qaarkooda aad buu u urayaa wuxuu yeelanahayaa qurmuun daran, waxaa habboon inay ku dadaasho haweeneyda isku aragta dhacaankan nadaafadda hoose waa inay kastuumada maalmo badan xirnaanin oo ay xirato kastuumo suuf ah oo aan ahayn nayloon, waa inay ku nadiifisaa biyo qandac ah oo cusbo wata guska raggana wax dhibaato ah kuma keeno..
Aqriso: Leefidda Taranka Dumarka Iyo jiqida ibta Naaska Labadooda Midka Ay Dumarka Kuhor Kacsadan